Guyana : Hopitaly nirehitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2008 12:12 GMT
Levon'ny afo omaly maraina ny sampana mikarakara ny fahasalamana ara-tsaina ao amin'ny Hopitalin'i Georgetown. Notantarain'ireo mpitoraka blaogy ao amin'ny Living Guyana amin'ny antsipirihany ity hay trano ity …
Ny lahatsoratra voalohany dia nanamafy fa tena saron'ny afo ny Observation Ward :
Voavonjin'ireo mpamonjy tranomay, mahay nefa tsy ampy fitaovana, ao Georgetown ny afo ka tsy afaka niampita tamin'ireo trano efa tranainy. Tsy vao ela akory izay no hita tamin'ny lohanteny lehibe tamin'ny vaovao isan-karazany ity toeram-pitiliana [Observation Ward] ity noho ny nahafatesan'ny vehivavy narary iray.
Fotoana fohy taorian'io dia namoaka sary izy ireo, ary nitatitra ny fanambarana nataon'ny Minisitry ny Fahasalamana ao Guyana sy filazam-vaovao avy ao amin'ny Hopitaly.
Rehefa maty ny afo dia namoaka sarin'ireo hazo feno setroka teo amin'ilay trano indray ny Living Guyana. Tao amin'ny Guyana Providence Stadium kosa dia manontany ny mpanoratra raha misy ambadika politika iny trano may iny :
Misy trano mirehitra foana isaky ny misy mitondra porofo ny kolikoly ao amin'ny Governemanta. Mety misy hifandraisany amin'ny tatitra nataon'ny Auditor General sy ny fividianana zava-mahadomelina ho an'ny hopitalim-panjakana ve iny hay trano iny ?
Tahaka izany koa, dia nanao fampitahana kivalavala ireo marary ao amin'ny sampana mikarakara ny fahasalaman-tsaina ao amin'io hopitaly io sy ireo “manana olana ara-tsaina ao amin'ny toeram-pitiliana iray antsoina matetika hoe ‘Cabinet'” ny Living Guyana.
Toa ho raisin'ireto marary ao amin'ny hopitaly amin'izao ny fitantanana ilay toby fitiliana iray ary. Tsy manantena fiovana betsaka avy amin'ny governemanta amin'izao ny Living Guyana, ary raha ny zava-misy amin'izao dia toa hizotra milamina ny famindram-pahefana. Raha ny resaka eny amin'ny arabe aza dia mety mahavita bebe kokoa izy ireo noho ireo marary saina amin'izao.